ဝေါဟာရကြွယ်ဝအောင် - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on August 11, 2011 at 13:45 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
တစ်ခါတလေမှာ ကိုယ့်မိခင်ဗမာစကားကိုပြောနေရင်းနဲ့ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့စကားလုံး ရှာမရတာမျိုးကြုံဖူးကြပါသလား။ “ဟိုလေ. . . အဲဒါ ဘယ်လိုခေါ်ပါလိမ့်... ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဟိုဒင်းလေ” စတဲ့ ဟိုဒင်း...တို့ ...ဟိုဟာ... တို့နဲ့ လိုရင်းကိုကွက်တိမရောက်နိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာ စိတ်အလိုမကျ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ဒါက ကိုယ့်မိခင်ဗမာစကား။
တခြား နိုင်ငံခြားဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကား ပြော တဲ့အခါကျတော့ တစ်ခါတလေ မကတော့ဘဲ ခဏခဏဖြစ်နေတတ်တော့ စကားတစ်ခွန်းပြောဖို့အရေး စကားလုံးကို လည်းစဉ်းစားရသေး၊ ထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေကိုလည်း ၀ါကျပြန်စီရသေးဆိုတော့ စိတ်ပျက်အားငယ်ရ တတ်တာ လေ့လာကာစ စာသင်သားတို့ မလွဲမသွေ တွေ့ကြုံရတဲ့ ဒုက္ခတစ်ခုပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ စာသင်သက်ကြာ လာတော့ စကားလုံးတွေဟာ မိုးရေမိုးစက်များတစ်ပေါက်တစ်ပေါက်နဲ့ စဉ့်အိုးကြီး ပြည့်လာသလို တဖြည်းဖြည်း များလာတဲ့အခါကျမှ နည်းနည်းအဆင်ပြေလာပါတော့တယ်။ ဒါတောင်မှ နေ့စဉ်သာမန် ပြောဆိုနေကျတာမျိုးမှာအဆင်ပြေနိုင်ပေမယ့် မိန့်ခွန်းလို ဟောပြောပွဲလို နေရာမျိုးမှာ အင်္ဂလိပ်လို့ပြောရတဲ့ အခါမျိုးမှာ စကားလုံးတိုင်းသည် တစ်ဖက်သားရင်ကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်မည့် စကားလုံးမျိုးကို ရွေးချယ်သုံးနှုံးရတဲ့အခါမျိုးမှာ အခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဘာသာစကားဆိုတာ လူသားတို့ရဲ့ အဓိက ဆက်သွယ်ရေးလက်နက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ လူသားတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့လက်နက်ကို ထက်မြက်နိုင်သမျှထက်မြက်နေအောင်အားထုတ်တဲ့အနေနဲ့ စကားလုံးအသစ်တွေတီထွင်ကြ၊ တစ်ချို့စကားလုံးတွေကို ကျောခိုင်းပစ်ကြ၊ တစ်ချို့စကားလုံးတွေကို အဓိပ္ပါယ်ပြောင်း ပစ်ကြ၊ တိုးပစ်ကြနဲ့ မဆုံးနိုင်အောင်ပါပဲ။ ဒီတော့ ကိုယ်က ဘာသာစကားတစ်ခုကို လေ့လာထားမိပြီ။ စထားမိပြီ ဆိုတော့ မဆုံးတမ်းဆက်လျောက်ရပေတော့မည်။ လေ့လာရပေတော့မည်။
၄င်းအုပ်စုသုံးစုတွင် အမှတ်စဉ် တစ်အုပ်စုသည် မဖြစ်မနေလေ့လာထားရမည်၊ မကြာခဏ ပြန်လည်ကြည့်ရှုရ မည့်စကားလုံးအုပ်စုဖြစ်သည်။ အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်အဘိဓါန်မှ ထုတ်ဝေသည့် Oxford 3000 words TM Keywords သည်စာသင်သားတို့ရည်ညွှန်းရန်ရှိသင့်သည့်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာသင်သားတို့အတွက် အသုံးအများဆုံးအင်္ဂလိပ်စကားလုံးပေါင်း ၃၀၀၀ ကို ပညာရှင်များက စနစ်တကျစုစည်းပေး ထားခြင်းဖြစ်သည်။ စာလုံးပေါင်းသုံးထောင်ဆို၍ လန့်မသွားပါနှင့်။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးသားကျောင်းသား တစ်ဦးသည် အနည်းဆုံးတော့ ၄င်းတို့ထဲမှ စာလုံး တစ်ထောင်ခန့် သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ လေ့လာရမည် ဆိုရာတွင် စာတစ်အုပ်လုံးအလွတ်ကျက်မှတ်ခိုင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ လုပ်လည်းမလုပ်သင့်ပါ။ စာဖတ်ရင်း၊ သတင်းနားထောင်ရင်း စကားလုံးအသစ်တစ်လုံးတွေ့သည်ဆိုပါဆို့။ ၄င်းစာအုပ်ထဲတွင်ရှာလိုက်ပါ။ စာရင်းထဲတွင်ပါပါက အရှေ့ဖက် တွင်ကြယ်အမှတ်အသားဖြစ်စေ၊ highlighter သုံး၍ဖြစ်စေ မှတ်ထားပါ။ ၄င်းစကားလုံး၏အဓိပ္ပါယ်နှင့် အသုံးပြုပုံကို နမူနာဝါကျနှင့်တကွလေ့လာကြည့်ပါ။ နောက်တစ်ကြိမ်စာလုံးအသစ်တွေ့၍စာအုပ်လှန်ရ ချိန်တွင်အရင်မှတ်ထားခဲ့သည်များကို ခရီးသွားဟန်လွှဲပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။ မကြာခဏ မြင်လာတဲ့အခါ အလွတ် ရလာပါလိမ့်မည်။ မိမိစိတ်ထဲ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရသွားသည့်စကားလုံးများကို အမှန်ခြစ်ပြထားပါ။ သည်လိုနှင့် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း စာအုပ်တစ်အုပ်လုံး အမှန်ခြစ်များချည်းဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။
ဘယ်ပညာရပ်မဆို သိချင်စိတ်ကရှေ့ဆောင်ပါတယ်။ Curiosity လို့ခေါ်တဲ့သိချင်စိတ်၊ စူးစမ်းချင်စိတ်ကြာင့်ပဲ ကမ္ဘာကြီးဟာဒီနေ့ဒီလောက် တိုးတက်နေတာပါပဲ။ ဝေါဟာရလေ့လာတဲ့အခါ စကားလုံးတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိနေကြပါတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ မနက်မိုးလင်းလို့ ကောက်ဖီ ဖျော်ဖို့ ပုလင်းကို ကိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာ Nescafé Gold Blend, premium quality ဆိုတဲ့စာတမ်းကိုနေ့တိုင်း တွေ့ရပါမယ်။ ဒါကဥပမာအနေနဲ့ပြောတာပါ။ blend တို့ premium တို့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေမသိရင် သိအောင်လုပ်လိုက်ပေါ့။ တခါတလေ နှာစေးအအေးမိလို့ Decolgen သောက်တဲ့အခါ ဒီလိုမျိုးလေး No drowse ဆိုတဲ့စကားလေးရှိတယ်တွေ့ရဦးမယ်။ မြို့ထဲသွားလို့လာလို့ ဘတ်စကားပေါ်ကနေ ငေးကြည့်ရင်း လည်း စကားလုံးအသစ်ကလေးတွေရတတ်တာပါပဲ။ TV ကနေ သတင်းတွေနားထောင်ရတာဝါသနာပါတဲ့သူဆိုရင် အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲ။ TV ဆိုတာက သတင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို အမြဲတမ်း update တင်ပြနေတာဆိုတော့ ကိုယ်မသိတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကို ထပ်ကာထပ်ကာ ကြားနေရတတ်တယ်။ အရုပ်ေ ရာ၊ အသံရော မြင်ရပြီးတော့ သတင်းရဲ့မူရင်းနောက်ခံအကြောင်းတရားကိုသိထားရင် အဲဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ခန့်မှန်း တွက်ဆနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာပြရရင် အယ်ဂျာဇီးရားရုပ်သံအင်္ဂလိပ်ပိုင်းဟာကျွန်တော် စွဲစွဲမြဲမြဲကြည့်တဲ့ သတင်းလိုင်းတစ်ခု ပေါ့။ အရေးအခင်းတစ်ခုအကြောင်း သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ The police are telling the crowd to disperse. ဆိုတဲ့စာကြောင်းမှာ disperse ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုမသိဘူး။ ဒါပေမယ့် လူအုပ်ကြီးရယ်၊ ရဲတွေရယ်၊ အော်လံကြီးနဲ့ပြောနေတာရယ် စတဲ့ contex အရ disperse ဆိုတာ လူစုခွဲဖို့ပြောတာမှန်းခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီစကားလုံးကို အလွတ်ကျက်စရာမလို ဘဲနဲ့တစ်ခါတည်းမှတ်မိခဲ့တယ်။
Permalink Reply by minnyanthar on August 11, 2011 at 18:48
လိုနေတဲ့ပုံစံကို ချပေးထားတာ တန်တယ်ဗျ
လုပ်တော့လုပ်နေတာပဲ အကိုလောက် မစုံတော့ သိပ်မထိရောကဘူး
Permalink Reply by Thein Zaw on August 11, 2011 at 19:57
Permalink Reply by Vanilla candy on August 12, 2011 at 1:45
"There is no hard-and-fast rule in English language learning."
Thanks for sharing and contribution to English Learners.
Permalink Reply by tun lwin on August 12, 2011 at 10:09
Invaluable post for language learners.
Permalink Reply by thandarthan on August 12, 2011 at 12:26
Permalink Reply by 3sjl8rv3yyfvx on August 14, 2011 at 18:39
Permalink Reply by Mya Sandi Tun on August 12, 2011 at 10:37
thank you, this is so good.
Permalink Reply by hein htet on August 12, 2011 at 10:53
Thank you very much Ko Zarni .
Permalink Reply by Lay Maung Jr. on August 12, 2011 at 10:59
Very grateful to you! Ko Zar Ni
much knowledge on learning vocabularies.
Permalink Reply by EI EI SHEIN on August 12, 2011 at 11:00
so thanks brother
Permalink Reply by ngae on August 12, 2011 at 11:05
Thank u so much brother.These are very useful for me who is beginner for English. By the way , i like ur way that to learn vocabulary.
Permalink Reply by Linn Htut on August 12, 2011 at 11:14
Thank you so much, Ko Zarny. May I request for other useful issues!